Chii chinonzi Kuzvipira Kugadzirira uye ndeapi mabhenefiti? | ECommerce nhau
Chii chinonzi Kuzvipira Kugadzirira uye ndeapi mabhenefiti?
Kana uchitaura nezve Kuzvitsaurira kuitisa kunoreva kune webhu yekumisikidza setup mune iyo sevha yakanyatsogadzirirwa kune imwe kambani ine chinangwa chimwe chete, mune ino webhusaiti.
1 Chii chinonzi Kuzvipira Hosting?
2 Ndeapi mabhenefiti eIkuzvipira Hosting?
Chii chinonzi Kuzvipira Hosting?
Kusiyana nezvinoitika ne web hosting yakagovaniswa, mune sevha inoshanda senge inomiririra mawebhusaiti mazhinji, a Dedicated server hosting ndeye chete kune imwe chete saiti. Iyo inogona kugadziridzwa mukati kana kunze sevhisi kubva mukati meruzivo nzvimbo.
Ndeapi mabhenefiti eIkuzvipira Hosting?
Kune zvakawanda zvakanaka zveDedicated Hosting iyo makambani anofanirwa kufunga nezvayo kana uchitsvaga a webhu kubata.
Kugadziriswa Iva yakatsaurirwa yekutambira inobvumira imwe rusununguko uye chengetedza izvo zvimwe zvirongwa zvewebhu zvekupa hazvipe. Icho chingori chokwadi chekuti server yakatsaurirwa chete kune webhusaiti, zvinoreva kuti sevha inogona kuchinjiswa kune chaiyo zvinodiwa zvemutengi iyeye. Naizvozvo zvinovimbiswa kuti iwe unongobhadhara chete izvo maficha anodiwa.
Nguva yekuita. Kana saiti ikasaratidzika kana kugara pasi kwenguva yakareba, vashandisi vanongotarisa kumwe kunhu. Nesava yakatsaurirwa iwe unogona kuve nekuita kwepamusoro uye kugadzikana kuve nechokwadi chekuti peji rewebhu rinoramba richimhanya ingangoita zana% yenguva
Chengetedzo. The mapeji akabatwa pane Kubata yakatsaurirwa bvumira kuitiswa kwekuchengetedza matanho senge antivirus uye firewall. Kwete izvozvo chete, marongero ekuchengetedza ari nani kuchinjika kumabasa iwo pachawo.
Tsigiro. Pakupedzisira, a Kubata ne server yakatsaurirwa kazhinji inouya neimwe nhanho yekutsigirwa, iyo yakakosha sezvo vazhinji vatengi veiyi mhando yewebhu yekubatira vanoshandisa sevhisi iyi kuchengetedza zvakakomba kana zvakakosha manejimendi kana komputa mabasa. Zvakajairika kuti rutsigiro rupihwe maawa makumi maviri nemana pazuva gore rese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » Chii chinonzi Kuzvipira Kugadzirira uye ndeapi mabhenefiti?
Nei Ecommerce yako uchifanira kushandisa Bing Webmaster Zvishandiso?
Ecommerce zvemukati zvekushambadzira mafambiro e2017